The Angel World - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
Iza moa izahay? > Mino ny WKG > Ny tontolo ara-anjely
Ny anjely dia noforonina fanahy. Nomena safidy malalaka ianao. Ny anjely masina dia manompo an’Andriamanitra amin’ny maha-iraka sy solontena azy, dia fanahy manaiky ho an’izay hahazo famonjena, ary hiaraka amin’i Kristy amin’ny fiverenany. Antsoina hoe demonia sy fanahy ratsy ary fanahy maloto ireo anjely tsy mankatò. Ny anjely dia fanahy, iraka ary mpanompon'Andriamanitra. (Hebreo 1,14; Epifania 1,1; 22,6; Matio 25,31; 2. Petrus 2,4; marika 1,23; Matthew 10,1)
Izay ampianarin'ny filazantsara momba ny anjely
Ny filazantsara dia tsy natao hamaliana ny fanontaniantsika rehetra momba ny anjely. Izy ireo ihany no manome antsika fanazavana faharoa rehefa miditra ny lampihazo ny anjely.
Ao amin'ny tantaran'ny filazantsara, ny anjely dia niakatra teo anoloan'i Jesosy. Niseho tamin’i Zakaria i Gabriela mba hanambara fa hanan-janakalahy izy - Jaona Mpanao Batisa (Lio 1,11-19). Nilaza tamin’i Maria koa i Gabriela fa hanan-janakalahy izy (and. 26–38). Nisy anjely nilaza izany tamin’i Josefa tamin’ny nofy (Mat 1,20- iray).
Nisy anjely nanambara ny fahaterahan’i Jesosy tamin’ny mpiandry ondry ary nisy andian’olona any an-danitra nidera an’Andriamanitra (Lio 2,9-15). Nisy anjely niseho tamin’i Josefa indray tao amin’ny nofy mba hilaza aminy handositra ho any Egypta ary avy eo, rehefa azo antoka, dia hiverina (Matio 2,13.19).
Voatonona indray ny anjely tamin’ny fakam-panahy an’i Jesosy. Nanonona andinin-teny iray avy ao amin’ny Baiboly momba ny fiarovan’ny anjely sy ny fanompoan’ny anjely an’i Jesosy i Satana rehefa tapitra ny fakam-panahy (Matio. 4,6.11). Nisy anjely nanampy an’i Jesosy tao amin’ny zaridainan’i Getsemane nandritra ny fakam-panahy mafy2,43).
Nandray anjara lehibe tamin’ny nitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty koa ny anjely, araka ny voalazan’ireo Filazantsara efatra. Nisy anjely nanakodia ny vato ary nilaza tamin’ireo vehivavy fa nitsangana tamin’ny maty i Jesosy8,2-5). Nahita anjely iray na roa tao anatin’ny fasana ireo vehivavy6,5; Lioka 24,4.23; Jaona 20,11).
Ny irak'Andriamanitra dia nanondro ny maha-zava-dehibe ny fitsanganana amin'ny maty.
Nilaza i Jesosy fa handray anjara lehibe koa ny anjely rehefa hiverina izy. Ny anjely dia hiaraka aminy amin’ny fiverenany ary hanangona ny olom-boafidy ho amin’ny famonjena sy ny ratsy fanahy ho amin’ny fandringanana (Matio 1.3,39-49; 24,31).
Afaka niantso anjely legiona i Jesosy, nefa tsy nangataka azy ireo6,53). Homba azy ianao rehefa miverina izy. Handray anjara amin’ny fitsarana ny anjely2,8-9). Izany angamba no fotoana hahitan’ny olona ny anjely “miakatra sy midina eo ambonin’ny Zanak’olona” (Jao 1,51).
Ny anjely dia afaka miseho amin’ny maha-olona na amin’ny voninahitra tsy mahazatra (Lio 2,9; 24,4). Tsy maty na manambady izy ireo, izay miharihary fa tsy manao firaisana ara-nofo ary tsy miteraka ( Lioka 20,35:36 ). Ny olona indraindray dia mino fa ny fisehoan-javatra tsy mahazatra dia avy amin’ny anjely (Jao 5,4; 12,29).
Nilaza i Jesosy fa manana anjely any an-danitra hiambina azy ireo “ireo madinika mino Ahy ireo” (Matio 1 Kor.8,6.10). Faly ny anjely rehefa mitodika amin’Andriamanitra ny olona ary mitondra ny olo-marina maty ho any amin’ny paradisa ny anjely5,10; 16,22).